Filtrer les éléments par date : vendredi, 15 janvier 2021
vendredi, 15 janvier 2021 21:14
Pilo kely Maroantsetra : Prix lavanila efa ho prix pomme de terre
Asa iza ambony, asa iza ambany.
Nihaona tamin’ny Minisitry ny mponina sy ny fiahiana sosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy, Michelle Bavy Angelica tetsy amin'ny birao fiasan'ity farany etsy Ambohijatovo ny delegasiona Karana ao amin’ny Vondrona Bohra, androany.
Voaresaka tao ny fomba ahafahan’ny roa tonta miara-miasa akaiky mba hitondra tombontsoa ho an’ny mponina eto Madagasikara.
Hanao tolo-tanana ho an’ireo Mponina misedra ny kere any Atsimo izy ireo. Eto Antananarivo indray dia hanamboatra toeram-pidiovana amin’ny faritra Besarety, Isotry, Tsaralalana ; hanorina fanasan-damba ireto karana ireto ary koa hametraka jiro mandeha amin’ny herin’ny masoandro amin’ireo faritra mbola maizina.
Hanolotra sakafo masaka ho an’ireo zokiolona ny Vondrona Bohra, ny sabotsy 16 janoary ka an’arivony no kendreny hisitraka izany.
vendredi, 15 janvier 2021 20:21
Sekoly FJKM : Nosokafana ofisialy androany ny taom-pianarana 2020-2021
Natao tao Arivonimamo androany ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana 2020-2021 eo anivon'ny Sekoly FJKM manerana ny Nosy.
Nitondra am-bavaka izany ny filohan’ny FJKM, Irako Andriamahazosoa Ammi, Mpitandrina.
Nandritra izany dia nisy ny fankasitrahana manokana ireo mpianatra mendrika nandritra ny taona lasa.
Volamena 73.5kg : "Mitenena izay mahalala, raha tsy izany mangina mandrakizay"
Mahafinaritra ahy mandritra ny fanamasinana Mariazy ataon'ny mopera foana io fanontaniana io amin'ny mpanatrika tonga eo.
"Izay manana ambara amin'ny mety anakanana ny fanambadian'izy roa ireto, dia mitenena izao, raha tsy izany dia mangina mandrakizay".
Toy izany koa ianareo amin'ny douane ao, ianareo ao amin'ny PAF miambina ny sisin-tany, "mitenena raha manan-kambara" anakanana izao passoire ao izao, raha tsy izany mangina mandrakizay, ary aza be taraina aty ambadika aty avy eo, fa efa vita ny mariazy amin'ny fahantrana sy kolikoly tsy azo atao inona intsony fa zakao mandra-maty eo, fa tsy be takoritsoka eo intsony.
vendredi, 15 janvier 2021 11:31
Betsiaka : Mangataka hitrandraka volamena ny mponina
Ny 8 janoary lasa teo no nanatanteraka fivoriam-be farany narahina fanaovan-tsonia ny mponina any Betsiaka Ambilobe.
Mangataka amin’ny fanjakana sy ny ONG Fanamby izy ireo hitrandraka volamena any amin’ny toerana tsy lavitry ny faritra arovana Andrafiamena Andavakoera.
Tany mangadihady izy io, fa ny ala fady izay ao anatin’ny faritra arovana tantanin’ny ONG Fanamby kosa dia eo amin’ny 500 metatra miala eo no misy azy.
Manankarena zavamaniry sy biby tsy fahita firy izany ala izany ka mahasarotiny ny fitondrana ny fiarovana azy.
Nirongatra be ny fitrandrahana volemana manakaiky izany faritra arovana izany ny volana desambra teo.
An-jatony aman’arivony ny mpitrandraka madinika nirohotra tany.
Nandefa miaramila sy zandary ary polisy ny fitondram-panjakana nandroaka azy ireo.
Nanolotra « générateur de dialyse » na milina fanadiovana rà miisa 18, sy ireo kojakoja ary akora manaraka izany ny Fikambanana « Aurar » avy ao amin’ny nosy rahavavy La Réunion, ho fandraisany anjara amin’ny fitsaboana ny aretin’ny voa eto Madagasikara.
Ho tsinjaraina ho an’ny HJRA, CHU Befelatanana, ary CHU Analankinina Toamasina ireo fitaovana ireo mba ahafahan’ny vahoaka misitraka izany.
vendredi, 15 janvier 2021 11:17
Anahidrano-Antsohihy : Noravain’ny “Vara-mandady” ny Lycée
Rava tanteraka ny Lycée Anahidrano, Distrik’Antsohihy noho ny rivo-mahery mifofofofo antsoina hoe “Vara-mandady” ny 01 janoary 2021.
Nidina ifotony nijery ny zava-nitranga ny Governoram-paritra sy ny Solombava-bahoaka voafidy tao Antsohihy, ary harenina avy hatrany izany toeram-pianarana izany.
Hanomboka amin’ny alatsinainy ho avy izao ny asa fanarenana mba hahafahan’ireo mpianatra manohy ny fianarana.
vendredi, 15 janvier 2021 09:58
RN13 : Hovitaina ihany ve sa tsia ny asa ?
Hiala tsy hanao politika intsony ny filoha Andry Rajoelina raha tsy vitany ny lalana RN13 Tolagnaro-Ihosy, araka ny teniny izay nanakoako tokoa tamin’ny taon-dasa.
Mbola namafisiny tamin’ny kabariny ny 31 desambra 2020 teo fa anisan’ireo tetikasa goavana hatomboka amin’ity taona 2021 ity ny fanamboarana izany lalam-pirenena izany.
Angamba ho ny talata faha-19 janoary izao no hambara amin’ny fomba ofisialy ny fanombohan’ny asa.
Hatao any Tolagnaro amin’io andro io mantsy ny fanombohana ny fambelonkazo manerana ny nosy amin’ity taona 2021 ity.
Mety ho lanonana maro sosona no hisy any an-toerana amin’io andro io.
Anisan’ny mampijaly ny mpampiasa lalana raha iny RN13 iny manokana.
Ankoatra ny faharatsiany dia manao ny ataony ihany koa ny afitsoky ny asan-dahalo sy ny jiolahy, izay mampalaza ny any Atsimo.
Amin’izao indray dia misy ny tiomena izay manototra ny ampahan-dalana eo anelanelan’Ambovombe sy Tolagnaro.
Tototra hatrany amin’ny antsasa-metatra ao anaty godram-bovoka (fa tsy godram-potaka) ny arabe ka fahoriana ny fandehanana eo aminy.
Misy aza ireo izay tena tototra lalina mihitsy.
vendredi, 15 janvier 2021 09:53
Raharaha volamena 73,5kg : Manara-maso akaiky ny fivoaran’ny toe-draharaha ny Minisiteran’ny Raharaham-bahiny
Nanao fanambarana ny Minisiteran’ny Raharaham-bahiny Malagasy ho fampahafantarana ny fifampiresahana eo amin’ny Fanjakana malagasy sy ny governemanta afrikana tatsimo mikasika ny raharaha fanondranana volamena antsokosoko tra-tehaka tatsy Afrika Atsimo.
Raha tsiahivina dia natolotry ny Minisitry ny Raharaham-bahiny malagasy an-tanana ny Masoivoho afrikana tatsimo miasa sy monina eto Madagasikara, ny 10 janoary 2021 lasa teo, ireo antontan-taratasy fangatahana fampiharana ny fifandraisana iraisam-pirenena hamerenana eto Madagasikara ireo volamena naondrana antsokosoko, sy ireo olona miisa telo voasaringotr’ity raharaha ity.
Nampitain’ny Masoivoho tamin’ny Minisiteran’ny Raharaham-bahinin’ny Firenena Afrika Atsimo (Departemantan’ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny fiaraha-miasa) izany fangatahana izany. Ity farany kosa no nanolotra ireo antontan-taratasy ny tompon’andraikitra ara-pitsarana mahefa any an-toerana.
Eo andalam-pandinihina ny fangatahan’ny Fanjakana malagasy izy ireo ankehitriny.
vendredi, 15 janvier 2021 09:48
Mpifindra monina : Mpandeha niisa 285 najanon'ny fiara nitondra azy ireo teo Kelivondraka
Mpifindra monina avy any Amboasary Atsimo sy Ambovombe Androy mitotaly 285, nahitana ankizy 75, vehivavy 42, lehilahy 168, no tafajanona teo Kelivondraka, amin'ny sampanan'ny RN13 sy RN7 ny 12 janoary 2021 teo.
Nandositra ny haintany sy hanoanana any atsimo izy ireo, ka najanon'ny fiara nitondra azy ireo teo, fa hafindra amina fiara hafa.
Nandray andraikitra ho fanampiana azy ireo ny Goverinoran'ny faritra Ihorombe, niaraka tamin'ny Talem-paritry ny mponina, ny lehiben'ny Zandary tao an-toerana nanolotra sakafo miampy ny trano lay iray lehibe an'ny BNGRC nialofan’izy ireo.
Afaka niainga ny 13 janoary 2021 folak'andro ny ampahany voalohany, ary omaly atoandro no niainga tao Ihosy ny 130 andiany farany tamin'izy ireo hiazo an’Antananarivo.
Nanambara ny Governora fa tsy azo ekena intsony ny fanaovana “transbordement” toy izao ao Ihorombe, fa tsy maintsy ataon'ireo mpitatitra tonga hatrany any amin'izay toerana hitodiany ny mpandeha entiny, mba hitandrovana ny fahasalamana sy ny fandriampahalemana.